बस दुर्घटना? मृतक १९ जनाको सनाखत?
काठमाडौं, १२ मंसिर । बुधबार दिउँसो ३ बजे सन्धिखर्कबाट बुटवलका लागि छुटेको लु २ ख २१४८ नं को बसमा यात्रा गरेका राप्ती गाउँपालिका–९ का प्रशान्त सुवेदी सिटमा बसेको केही समयमै निन्द्रामा पर्नुभयो । यात्रा गर्दा प्राय निदाउने सुवेदी
नरपानीमा तब मात्र ब्युँझनुभयो जब उहाँ सवार बस सडकबाट खस्यो । गाडी एक भर्ल्याङ तल खसेपछि उहाँका आँखा खुले । झ्याल नजिक बसेका सुवेदी हत्तपत्त हामफाली बच्न सफल हुनुभयो । उहाँले हेर्दा हेर्दै बस सडकबाट सयौँ मिटर तल खस्यो ।
हामफाल्दा उहाँ भुइँमा बजारिनुभयो । ज्यान बचाउन सफल रहे पनि पूर्णरूपमा सकुशल रहन भने सक्नुभएन । उहाँको करङ र हात ‘फ्र्याक्चर’ भएको छ । चोटपटक पनि लागेको छ । अहिले काठमाडौँको बिएण्डबी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका सुवेदीले
आफूले ज्यान बचाउन सफल भए पनि आफूसँगै यात्रा गरेका १९ जनाले ज्यान गुमाउँदा निकै दुःख लागेको बताउनुभयो । “ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएर नयाँ जीवन पाएँ”, सुवेदीले भन्नुभयो, “घाइते भए पनि आफँहिँडेर सडकसम्म आएको थिएँ ।”
सुवेदीकी श्रीमती सुजताले श्रीमान्लाई जीवित देख्न पाएकामा निकै खुसी लागेको बताउनुभयो । “दुर्घटनाको खबर पाएपछि उहाँको मोबाइलमा फोन गर्दा ट्राफिकले फोन उठाए”, उहाँले भन्नुभयो, “निकै रोएँ, आत्तिएँ तर भेटेपछि मात्रै मन हल्का भयो ।” प्रभु लाइभ इन्स्योरेन्सका क्षेत्रीय प्रबन्धक सुवेदी कार्यालयको कामले सन्धिखर्क पुगेर फर्कँर्दै हुनुहुन्थ्यो । दुर्घटनामा घाइतेमध्ये उहाँको मात्र काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ !
२०७८ भाद्र २३, बुधबार ००:२१0Minutes 347 Views